SPC na-ewepụta elekere abụọ ọhụụ na ego belatara, Smartee Pop na Egwuregwu | Akụkọ akụrụngwa
SPC na-ewepụta elekere abụọ ọhụụ na ego belatara, Smartee Pop na Egwuregwu
SPC na-aga n'ihu na-arụ ọrụ iji nweta ọchịchị onye kwuo uche n'ọtụtụ ebe, otu n'ime ndị ọkacha mmasị ya bụ uwe, na-enye ngwaahịa yana ọnụahịa dị ala dị ala, na agbanyeghị na ha esighi n'oge maka ike na ngwaike, ha na-ekwe ka onye ọrụ a na-enyeghị ụdị ihe a nweta nkeji mbụ.
Taa, anyị ga-enye SPC ọhụụ, anyị na-ekwu maka elele anya abụọ nwere ikike ịkọwapụta na atụmatụ dị egwu. Smartee Pop na Smartee Sport bụ ụzọ abụọ na-atọ ụtọ nke ukwuu nwere njiri mara dị egwu, ka anyị matakwuo ha nke ọma.
Anyị na-amalite na Smartee gbapụta, a ngwaọrụ nke nwere 57 gram na nke na-enye nnwere onwe nke ihe ruru ụbọchị ise nke arụmọrụ site na ntinye obere ihe na ntinye aka ya. Anyị na-eche ihu a okirikiri na ewepụghị ihuenyo, dị ka ọtụtụ ndị ọzọ dakọtara na gam akporo. N'ihe banyere Smartee Pop anyị ga-ahụ ọtụtụ eriri dị ezigbo mma. Iji rụọ ọrụ ọ na-eji 128MB ROM na 64MB RAM, na-enye 1,3-inch IPS ihuenyo nke ga-enwe ike ịrụ ọrụ na-enweghị nsogbu ọ bụla na gam akporo ekele Bluetooth 4.0 ala oriri.
N'aka nke ozo Egwuregwu, nke ihe dị iche bụ na ọ dị oji ma dịrị ihe dị ka gram iri karịa, nwere otu ngwaike mana ọ na-etinye ihe mmetụta dịka altimeter, barometer na temometa na mgbakwunye GPS. N'ihe banyere ngwanrọ, a na-egbu ha abụọ site na ngwa SPC, na-enye anyị ohere ịkpọku onye enyemaka olu ma nyochaa egwuregwu anyị niile. O nwere ike ịlele etu obi dị, tụọ usoro, mee ka onye enyemaka olu rụọ ọrụ, yana ịdebe ebumnuche na ụra. Ha adịlarị na ahịa.
Smartee gbapụta dị na ọnụahịa nke 89,90 euro.
Egwuregwu Smartee dị na ọnụahịa nke 129,90 euro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » SPC na-ewepụta elekere abụọ ọhụụ na ego belatara, Smartee Pop na Egwuregwu
The Yahoo mbanye anataghị ikike emetụta niile ha ọrụ na akaụntụ
Ihe dị ọhụrụ na Google: Pixelbook, Pixel 2 na ndị ọzọ